Igumbi labucala entliziyweni yeVeracruz - I-Airbnb
Igumbi labucala entliziyweni yeVeracruz
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguCarlos
Igumbi kwiflethi kwiziko lembali laseVeracruz, amanyathelo ambalwa ukusuka kwisikwere esikhulu sesixeko, ibhloko enye ukusuka kwi-boardwalk, kufutshane nee-portals.
Ukuba u tyelela iVeracruz kwaye ufuna ukuhlala entliziyweni yeso sixeko, ufanelwe le ndawo, apha unokupheka, ukuhlamba, ukuphumla, kunye nokwabelana nabaninimzi, nantoni na oyifunayo.
Kubalulekile ukuba uyazi ukuba sisanda kwamkela intshontsho lekati, elibizwa ngokuba yiNebula, ukuze uyithathele ingqalelo, ukuba unomdla esithubeni.
Igumbi linepleyiti etshixwayo, apho lundwendwe kuphela oluya kuba nokufikelela. Ukuba unqwenela, ungasebenzisa ikhitshi kunye neendawo eziqhelekileyo ezifana negumbi lokuhlala, i-balcony, igumbi lokudlela, njl. Umenzi wekofu weCoatepec kunye nekofu zihlala zikhona.
Umabonakude ukwigumbi lokuhlala, asinaye egumbini.
Igumbi lokuhlambela likwabelwana kwaye lifumaneka kwi-corridor yendlu.
I-TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Disney+, I-Chromecast
Uyayiva intshukumo yesixeko esiguqukayo, siqhele ukumamela iikonsathi ezenzeka ezócalo, boardwalk, njalo njalo, kodwa sikwabona uqhanqalazo olunoxolo oluqhuba (ngeeCawe ezithile) eyona ndlela iphambili. Le ndawo ithule kakhulu, ngokwemiqathango yokhuseleko.
Me adapto al contexto en que me encuentre, soy una persona tranquila, me gusta cocinar y conocer de otras culturas.
Sinobudlelwane kakhulu, xa kunokwenzeka ukuba kubonwe, kodwa nathi sigcinwe kakhulu.
Ngezinye iindwendwe siye sapheka ukutya kweVeracruz, sikhenketha iziko lembali, ukuqubha, ikofu, njl. Konke kuxhomekeke kwixesha elikhoyo, kunye nondwendwe. Ukuba ufuna iingcebiso, yabelana ngenkcubeko yakho, incoko, njl., yenza nje, ngokuqinisekileyo iya kuphuma kakuhle.
Ngezinye iindwendwe siye sapheka ukutya kweVeracruz, sikhenketha iziko lembali, ukuqubha,…